Honda lasantsy motera - Nantong ANT milina Co., Ltd
Honda lasantsy motera
Home » Product » Honda lasantsy motera
Honda manomboka ao amin'ny 1948 mba hamokarana bisikileta maotera hery, efa ho "manonofy" toy ny fiara hery ho "entam-barotra" ao ny endriky ny olona tsirairay sy ny fiaraha-monina manohy manome ny midadasika kokoa finday kolontsaina isan-karazany.
"Ny fanajana ny maha", ny maha zava-dehibe ny tsirairay \_ 's toetrany, dia toy izany no mamela ny Honda namorona kaja famoronana tehina, velabelarina be orinasa kolontsaina malalaka. ankehitriny, Honda Lasa fahita amin'ny fitaovana kely, môtô sy ny fiara pedal, sy ny saha manana ny teknolojia tany am-boalohany, ary hanohy ny fampandrosoana, famokarana ny orinasa vokatra vaovao.
Barotra hatrany am-piandohana, Honda no ao amin'ny "fahafaham-po ho an'ny mpanjifa amin'ny sisa amin'izao tontolo izao," foana ny hevitra hoe manokatra ny rariny izy.
"Ahoana no ahafahan'ny mpanjifa fahafaham-po ny eo an-toerana" toy ny zava-kendren'izany, tsy mba manome ho an'ny fametrahana entana eo an-toerana sy ny asa amin'ny malalaka tambajotra varotra, eo an-toerana ihany koa ny nametraka ny famokarana sy ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao nametraka rafitra.
Amin'izao, afa-tsy Japana, Honda 29 firenena eto amin'izao tontolo izao mihoatra ny 120 famokarana bases, ny môtô, fiara sy ny levitra vokatra, tsirairay ny mpitsidika, izay rehetra 17 tapitrisa more.
Mandritra izany fotoana izany, Honda mavitrika ihany koa ny orinasa manao toy ny olom-pirenena amin'ny adidy ara-tsosialy, ary mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny hijery fiarovana vahaolana.
Global ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao olana \_ 's mitsahatra malaza, Honda in vokatra fampandrosoana, famokarana sy ny fivarotana ny asa aman-draharaha isan-karazany ao amin'ny ezaka mba hamaha ny fahalotoan'ny rivotra sy ny hampihenana ny famoahana entona CO2, ny fampiasana ny loharanon-karena mahomby sy ny angovo olana, mba hahatratra ny émission fanadiovana entana, Mampihena ny fandaniana solika, ny pamokarana, "Green Factory" ary nandray andianà fepetra mba hampihena ny fiantraikany eo amin'ny tany \_ 's tontolo iainana dia nanao tsara fandraisana anjara. Fa ny fanomezana finday kolontsaina ny mpanamboatra, Honda tsy vitan'ny hoe mandinika ny tantsambo ihany koa ny mihevitra ny fiarovana ny mpandeha an-tongotra, mba hamokarana bebe kokoa fiarovana entana. Mandritra izany fotoana izany, handray anjara mavitrika amin'ny azo antoka mitondra fiara, sy ny asa fitoriana hafa mba hamaha ny olana ny rafitra fitaterana, hanorina bebe kokoa ny fiaraha-monina manan-karena finday, ary manao Nifanesy koa ny ezaka.
OHV marindrano Shaft
V-Twin OHV marindrano Shaft
No.1118 Fuyuan Road,Qidong,Jiangsu Province 226200 ,Shina